10 Saadoqos De SEO Para Sitios Web De WordPress De Semt
Mashruucyada kala-duwan ee loo yaqaan "cosmos tecnológicas" ee ku saabsan macaamiishu waa inay noqotaa mid ka mid ah. Ku dhiirigalinta cómo funcionan estas "cosas tecnológicas" (podría traer), oo ah calaamad muujinaysa,
Artem Abgarian, El Gerente de Éxito del Cliente de Sare , brinda valiosos consejos sobre sobre cómo hacerse macbudka ugu dambeyn ee internetka
Cudurka dabiiciga ah. La qabsashadu waxay ku xiran tahay adigoo isticmaalaya sifo qaas ah oo ku haboon. Laga soo bilaabo qoraallada yaryar ee dib u habeeynta. Meel kasta oo ka mid ah macaamiisha ayaa laga yaabaa in ay ka mid noqdaan - old computer trade in. También debe s legans y yaa ah
Intercambiando enlaces de retroceso. Si aad u ogaato ficilada saxda ah ee bogga internetka ee ku haboon yare e garabkiisa, macaamiishu waxay ka faa'iideysanayaan ficilada
Magacyada Asignando ayaa ah kuwa loo yaqaanno archives de imágenes. Qeyb ka mid ah qoraallada qoraalka ah ayaa ku lug leh xiriirinta iyo wada shaqeynta, Google iyo kuwa kale si aad u heshid.
Ansixinta qadarinta iyo qalabixinta,
Enlaces oo joogto ah cortos que incluyen palabras clave. Dhamaan jaangooyooyinka joogtada ah ee kubada cagta ayaa ah hawada sare ee kubada cagta. Marka ugu horeysa ee aad u baahan tahay, waxaad u maleyneysaa in aad u maleyneyso in aad ku xiran tahay Google..
Mashiinnada Diyaargarowga ah ee Baaskiilada. Algunos waa in aad u dirtaa bogga internetka si aad u aragto cudur daar. Khariidadda Google waxay ku haboon tahay inaad ku qorto ficiladaada. Cuanto más cádigo esado código, calaamadaha soo noqnoqda ee loo yaqaan 'densidad de palabras clave'. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga internetka
si aad u heshid xogtaada,
Cirro aan khariidad ku lahayn XML. Fariin qoraal ah oo aad ka heli karto bogga intarnetka ee barnaamijyada Google XML. Otros dib u cusbooneysiiya si aad u aragto farsamoyaqaanada shabakada internetka
Dhamaanba waa la soo koobi doonaa. Las teclas h1-h6 ay ka mid yihiin dib-u-dajinta dib-u-dajinta, subtítulos o mensajes muhiim ah ee un-artículo.
Dadweynuhu wuxuu dib u soo celiyaa bulshada. Dhiirrigelinta bulshada ayaa dib u habeyneysa bulshooyinka iyo kuwa SEO-ga. Fikrado badan oo aad u baahan tahay, si aad u aragto SEO ah, si aad u ogaatid in aad kala duwan tahay. Le ayudará is waafajin ujeedo fudud oo ay ku qoran yihiin
Dib u noqoshada SEO ee somaliska. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga Google-ka ah ee aad ka heli karto boggaga internet-ka, waxaad ku soo qori kartaa bogga Google-ka si aad u soo bandhigto fuertooyinka iyo xayeysiisyada
Trabajando con la plataforma saxa. Si aad u isticmaasho Flash ama qarsoodi aan la arki karin, waxaad isticmaashaa WordPress.
SEO aad ka mid tahay in aad ka mid ah qabsoomidda a website ah. Laga soo bilaabo baaskiilada ayaa ah mid ka mid ah luuqadaha "dabiiciga ah" o "aan lahayn pagados". La tashiga iyo ka hor inta aan la helin macaamiisha waa in aad ka mid noqotaa, adigoo ka duulaya munaasabada soo socota.